Ahoana no ahazoako lisitra avo lenta PR ho an'ny maimaim-poana?
Misy fomba maro ahafahanao mijery lisitra avo lenta PR mankany amin'ny tranonkalanao, miaraka amin'ny fotoana tsy ilana dollar. Alohan'ny zavatra hafa, misy karazana rohy anankiroa - dofollow sy nofollow - izay azo ampidirina ao amin'ny lisitry ny lisitry ny tranonkalan'ny PR anao.Ny doka ho an'ny Dofollow dia mijoro ho an'ny rohy maharitra natao hanatsarana ny fahamendrehan'ny tranonkala, mifanaraka amin'ny fitaterana tranonkala misimisy kokoa. Ny backlinks Nofollow dia ireo olona vonjimaika natsangana ho fampiroboroboana ny fifamoivoizana. Noho izany, inona no mahatonga ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny PR ho an'ny avo lenta? Andeha hojerentsika ny fomba tsara indrindra ahafahana mamorona azy io ho maimaim-poana.
Ny rohy mifangaro
Ny ilainao hampiasana rohy tapaka dia ny manana votoaty sarobidy izay mendrika azy. Midika izany fa afaka mahita bilaogy na loharanom-baovao an-tserasera ianao miaraka amin'ny fahefana ambony sy ny laharan'ny pejy. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mikaroka ireo manan-danja amin'ny resaka lohahevitra iray ihany, na ny tsenan'ny tsena mifanandrify amin'ny orinasanao manokana na ny foto-kevitra fanoratana. Amin'izany fomba izany, amin'ny fampiasana Chrome hafa, na fitaovana maimaim-poana an-tserasera dia tokony ho hitanao ny rohy tapakila mba hanolotra sori-drakitra vaovao ho an'ny referanda tsara kokoa. Farany, alefaso amin'ny mailaka na mailaka tsara fotsiny ny mailaka ary manondro ilay rohy tsy misy dikany ho solon'ny rohy misy anao. Ary izany dia miasa, satria ny roa tonta dia hanana tombontsoa iraisana. Mariho anefa fa na ny votoatiny vaovao sy ny mailaka fanamafisana aza dia tokony ho tsara sy handresy lahatra ampy hanapahana ny fanamafisana ny asa manontolo.
Fomba iray hafa hanamboarana lisitra avo lenta PR ho an'ny tranonkalanao dia ahitana ny infografika ao anaty votoatiny tsotra. Na dia mety hipoitra tsindraindray aza io asa io, mora ny mampihatra ary azo antoka fa handoa. Raha vao naverinao tamin'ny ampahany amin'ny votoatinao amin'ny tondrozotra tsara tarehy na tavoahangy sasantsasany, dia avelao handeha ho virjiny amin'ny fizarana amin'ny tranonkala sosialy malaza toy ny Facebook, Twitter, LinkedIn, sns.Amin'izany fomba izany, manoro hevitra aho mba hampiasa ny iray amin'ireto fitaovana maimaim-poana an-tserasera ireto hanampy anao amin'ny infographics: Staff. Lahy, Picko Chart, Infor. am, Google Charts.
Ny fandefasana ny votoatin'ny anaran-tsokosoko sasany dia ny fomba fahatelo indrindra amin'ny famoronana lisitra avo lenta PR ho anao tranonkala. Ary misy ny mari-pamantarana avo lenta avoakan'ny tranonkala hita ao amin'ny Internet, noho izany dia tsy hiatrika olana ianao hahita ny toerana mety hahazoana rohy malemy. Mariho anefa fa alohan'ny handefasana ny votoatiny dia tokony hifantoka amin'ireto manaraka ireto ianao:
aza misalasala amin'ny fametrahana fotoana sy ezaka amin'ny fanoratana lahatsoratra sarobidy sy tokana;
tsy misy dikany velively amin'ny karazana plagia izany na votoaty tsy misy dikany - izay tsy ho vita mihitsy;
dia manana mari-panamarinana roa foana mba hahafantarana raha azo itokisana ny lahatahiry iray;
ny lahatahiry karamaina rehetra dia tokony havaozina amin'ny fotoana fohy - na dia ampanantenainao hahita ny valiny tsimoramora aza ianao;
misoroka ny zava-drehetra tsy fantatra na vao haingana izay vao navoaka vao haingana - mety ho nokaravasina izy ireo na voavono;
dia ataovy azo antoka tsara ny manara-maso ny format manontolo eo alohan'ny hamenoanao azy ireo amin'ny antsipiriany rehetra Source .